Inta aan ka ogahay, qaab file wmv u ogolaanaya files video ballaaran in lagu tilmaantay Tifaftirayaasha BBC halka heysato inay tayo sare leh. Wmv videos laga yaabaa in tiraday oo lagu tilmaantay Tifaftirayaasha BBC waxaa laga yaabaa in ay isu barbar wax bandwidth (xawaaraha la xidhiidha). Sidaa darteed wmv videos noqdo mid aad loo jecel ka dhex video caashaqi jiray. Si kastaba ha ahaatee, wmv video lama jaanqaadi karaan qalabka macruufka sida iPhone. Sidaas darteed haddii aad leedahay wax badan oo files wmv iyo doonayaa inaan ciyaaro files kuwaas oo ku iPhone, aad u baahan tahay si loogu badalo wmv si iPhone qaab socon hore.
Si aad u dajiyaan files wmv aad galay iphone, qodobkan ku talin doonaa wmv weyn oo iPhone video Converter. Just akhri maqaalka si aad u hesho. Sidoo kale halkaan ka akhri si aad u hesho in ka badan oo lacag la'aan ah iPhone video converters .
Hel Converter Best & Professional iPhone
Tani wmv si iPhone video Converter kaa caawinaysaa in aad in la sameeyo qaab beddelidda si karti leh oo qaab aan muuqan. Isticmaalka qalab, uma baahnid inaad u baahan tahay in la xusuusto ku soo koobin video ku haboon, sida heerka yara, heerka jir, xallinta, iwm aad model iPhone sababtoo ah waxa ay si toos ah provideds horena u filaayo, waxaa ka. More muuqaalada:
Professional wmv si iPhone Converter: Converter wmv si iPhone fomat socon, sida MOV, M4V iyo MP4. Sidoo kale waxaad si toos ah u dhigay karaa presets iPhone sida qaab wax soo saarka.
Waraaqda Music From Movie: Waxaad isticmaali kartaa inay soo saaro music ka filimada aad jeceshahay in MP3 ama fomat AAC. Markaas waxaad ku raaxaysan karaan music ku saabsan iPhone.
Poweful Video ayeey Tool: Soo qaado this video iPhone Converter in ay jar, dalagga, darto saamaynta aad wmv video hor diinta.
Download Online Videos: app Tani waxay sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad soo bixi oo aanay online videos (YouTube, Facebook waxaa ka mid ahaa) inuu u ciyaaro aad iPhone.
Fiiro gaar ah: Hoos waxaan ku tusi doonaa sida loo badalo files wmv si iPhone in tallaabo Windows talaabo. Haddii aad rabto in aad si loogu badalo wmv si iPhone ee Mac, waxaad tagi kartaa User Guide of Video Converter u Mac (Mavericks, Mac OS X Snow Leopard, Libaaxa iyo Mountain Libaaxa ka mid ah).
Qeybta 1: Sida loo isticmaalo wmv si iPhone Converter
1. Ku dar wmv video in wmv in ay Converter iPhone (iPhone 5 / 5s ka mid ah)
Riix ah "Add Files" button. Waxaad dooran kartaa in aad ku darto files video ama fayl video ka PC, ama si toos ah video shuban ka qalabka.
2. Customize saarka goobaha
Riix ah "Qaabka Output" badhanka si ay u doortaan "iPhone" sida qaab wax soo saarka iyo la qeexo goobaha faahfaahsan. Wixii iPhone, Converter leeyahay horena la filaayo in waxa loogu talagalay si aad u dooran kartaa sida qaab wax soo saarka si toos ah aad:
Talo: Tani Converter Video sidoo kale waxay bixisaa function tafatirka awood leh, kaas oo awood kuu inay xaalkaa aad wmv ka hor inta qaab beddelidda, sida falinjeeerka ama beerista, isagoo intaa ku daray saamayn, watermark, iwm Plus, ugu danbeeyay ee iPhone 5 / 5s ayaa sidoo kale taageeray.
3. Start si loogu badalo wmv si iPhone (iPhone 5 / 5s ka mid ah)
Hit Beddelaan si ay u dhamaystiraan wmv in ay diinta ka iPhone. Markaas waxaad riixi kartaa "Open Folder" in la furo gal meesha files wax soo saarka ayaa la badbaadiyey.
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan wmv si iPhone (iPhone 5 / 5s mid)